के तपाईंले आफ्नो साझा मिडिया ब्रान्ड गर्नु पर्छ? | Martech Zone
हामी गहन सामग्री र इन्फोग्राफिक्स, ह्वाइटपेपर, भिडियोहरू र उनीहरूको सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरूको समग्र अनुसन्धान विकास गर्न धेरै मार्केटिंग टेक्नोलोजी कम्पनीहरूसँग काम गर्छौं। धेरै जसो भागका लागि हामी सँधै तिनीहरूको ब्रान्डको शक्ति प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दछौं। कम्पनी वा यसको उत्पादनहरू वा सेवाहरू उनीहरूले वितरण गर्ने सामग्रीमा आवाज र दृश्यहरूसँग सम्बन्धित हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
बस राख्नुहोस्, तिम्रो ब्रान्ड तपाईंको सम्भावितले सोच्दछ जब उसले वा उसले तपाईंको ब्रान्ड नाम सुन्छ। तपाईको नाम ब्रान्डको प्रस्तावको बारे जनतालाई थाहा छ भन्ने कुरा यो जनताले सोचेको हो - दुबै तथ्यात्मक (उदाहरण: यो रोबिनको अण्डा निलो बक्समा आउँछ), र भावनात्मक (जस्तै यो रोमान्टिक हो)। तपाईंको ब्रान्ड नाम उद्देश्यपूर्ण रूपमा अवस्थित छ; मानिसहरूले यसलाई देख्न सक्दछन्। यो निश्चित छ। तर तपाइँको ब्रान्ड कसैको दिमागमा मात्र अवस्थित छ। जेरी म्याक्लहलिन, एक ब्रान्ड के हो, जे भए पनि?
अन्य समय, हामी तिनीहरूको वितरित मिडिया ब्रान्डिंग अप्ट आउट। अक्सर जब हामी इन्फोग्राफिक्स विकास गर्छौं। वितरित मिडिया जस्तो कि ह्वाइटपेपर र इन्फोग्राफिक्स को साइटहरु मा साझा को एक अधिक अवसर छ। जब तिनीहरू एक ठूलो विज्ञापन को रूपमा देखा पर्दछ, यद्यपि, यो सामग्री साझा को संभावना को लागी चोट पुर्‍याउँछ। तपाईंले आफ्नो वितरित सामग्री ब्रान्ड गर्न कत्ति कडा र यो साझेदारी गर्न आफ्नो क्षमता चोट हुनेछ कि छैन यो निर्धारित गर्न आवश्यक छ।
उदाहरणको रूपमा, हामीलेaमा काम गरेका छौं एन्जीको सूचीको लागि इन्फोग्राफिक्सको श्रृंखला। एन्जीको सूचीमा वेबमा र बाहिर यस्तो आश्चर्यजनक भरोसा र कडा ब्रान्ड छ कि उनीहरूको ब्रान्डको प्रयोग एक दिमाग थिएन। व्यक्तिले सामग्री साझेदारी गर्न सक्दछ किनकि यो विश्वासयोग्य र पहिचान योग्य छ। जाँच गर्नुहोस् दन्त चिकित्सा हेरचाह गर्न मार्गदर्शन र ल्यान्डस्केपि and र लन केयरको लागि सिजन गाईड द्वारा सिजन। हामीले एन्फीको सूचि ब्रान्डि sty, स्टाइलिंग र लोगो प्रत्येक इन्फोग्राफिक्स मार्फत प्रयोग गरेका छौं।
अन्य समयमा, हामीले त्यस्तो कम्पनीहरूसँग काम गर्‍यौं जुन राम्रो चिनिएको थिएन र कडा ब्रान्डको अभाव छ, त्यसैले हामीले कम्पनीको ब्रान्डि thanको तुलनामा टुक्राहरूको पछाडि कथा केन्द्रित गर्‍यौं जुन एक सफल इन्फोग्राफिकको साथ सफल भयो, व्यापक रूपमा साझा गरियो, र प्रयोगकर्तालाई एउटा अवतरण पृष्ठमा लगियो जहाँ उनीहरू कम्पनीको भन्दा विषयमा केन्द्रित हुन सक्दछन्। हामीले हेलोवीन विषयवस्तु पनि प्रयोग गर्‍यौं किनभने इन्फोग्राफिक हेलोवीनको वरिपरि समय थियो!
पछिल्लोमा हाम्रो ध्यान विषय वितरित गर्ने थियो बिना भारी ब्रान्डि that जसले अनलाइन प्रकाशकहरूलाई इन्फोग्राफिक साझा गर्न हिचकिचाउँदछ। र यसले काम गर्यो!
अझै, अन्य समयमा, हामी इन्फोग्राफिक्सको श्रृंखलामा धकेल्‍यौं जुन ग्राहकको साइट प्रति दृढ रूपमा ब्रान्ड गरिएको थियो तर स्पष्ट रूपमा ब्रान्डको विज्ञापन नगरेको। हामी चाहन्थ्यौं कि इन्फोग्राफिक श्रृंखला उनीहरूको उद्योगमा शान्तसँग अधिकार निर्माण होस् ताकि प्रकाशकहरूले मिडिया साझा गरे र उनीहरूलाई कडा रूपमा ब्रान्ड गरिएको छ भनेर चिन्न सकेनन ... किनकि उनीहरू सबैको स्टाइल समान देखिन्थ्यो। प्रत्येक इन्फोग्राफिकको साथ, वितरण चौडा भयो। दुर्भाग्यवस, क्लाइन्ट (गल्तीले) हामीलाई छोडे पछि पुनःब्रान्डेड भयो र ती सबै गतिहरू गुमाए जुन निर्माण गरिएको थियो त्यसैले म तिनीहरूलाई देखाउन जाँदैछु।
यस दीर्घकालीन रणनीतिमा, हाम्रो लक्ष्य यो कम्पनीको रूपमा देखिनको लागि थियो विशेषज्ञताको स्रोत तिनीहरूको उद्योग भित्र। अर्को शब्दहरूमा - हामी इन्फोग्राफिक्सको लागि प्रयोग गर्यौं तिनीहरूको ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्, यसमा केन्द्रित हुनुहुन्न।
कसरी तपाइँ तपाइँको वितरित मिडिया ब्रान्ड को साझा को क्षमता मा एक ठूलो प्रभाव गर्न सक्छ। कडा ब्रान्डिंगले अनलाइन प्रकाशकहरूलाई बन्द गर्न सक्दछ - भिडियोको शक्ति, इन्फोग्राफिक वा ह्वाइटपेपरको पर्वाह नगरी। हामी मार्केटिंग उद्योगमा इन्फोग्राफिक्समा दैनिक पिच गर्छौं - र हामी ती ती उदाहरणहरू पल्टाउँदछौं जहाँ यो मूल रूपमा ठूलो विज्ञापन हो। प्रकाशकहरू विज्ञापन गर्न चाहँदैनन् तिम्रो लागि, तिनीहरू महान मिडिया प्रयोग गर्न चाहन्छन् जुन तपाईंले उनीहरूको श्रोताको साथ मूल्य निर्माण गर्न विकास गर्नुभयो। तपाइँको सामग्री विकास गर्दा तपाइँले प्रयोग गर्ने ब्रान्डि ofको गहिराइमा जानबूझो हुनुहोस्।
टैग: ब्रान्डब्रान्डेड इन्फोग्राफिक्सवितरित मिडियामार्केटिंग इन्फोग्राफिक्समार्केटिंग भिडियोहरूगैर-ब्रान्डगैर ब्रान्डित इन्फोग्राफिक्ससाझा मिडियाwhitepapers